The OnePlus 7 ga-ekpughe ụbọchị ngosi ya na Tuesday | Gam akporosis
Na Tuesday ka a ga-ekwuwapụta mgbe egosiri OnePlus 7
The OnePlus 7 bụ otu n'ime ekwentị ndị kachasị atụ anya n'oge opupu ihe ubi a. Obere nke nta anyị maara banyere ngwaọrụ ahụ. Amaara m otu izu ẹdụk ihe ga-abụ ya ngosi ụbọchị. Na mgbakwunye, CEO nke ụlọ ọrụ ahụ na-ahapụ anyị ugbua nwere ụfọdụ ọganihu na njedebe a. Ugbu a, anyị maara mgbe a ga-ekwuputa ụbọchị ịgba akwụkwọ gị.
Ọzọkwa, ọ bụ Pete Lau, onye isi ụlọ ọrụ ahụ, na-ahụ maka ịkpọsa. Kwuru na Tuesday anyị nwere ike na-atụ anya ozi ọma na mgbe a ga-ekpughe OnePlus 7. Ya mere, n'oge na-adịghị anya anyị ga-enwe nkwenye ndị ọrụ a.
Ọ bụ site na ozi na Twitter onye kwadoro na Tuesday anyị ga-enweta ozi a. Oge nke ọtụtụ tụrụ anya, nyere atụmanya a na-eme ka ọ pụta na OnePlus 7. Ajụjụ a bụ ma ọ ga-abụ otu ụbọchị ngosi a gaferela otu izu gara aga ma ọ bụ na ọ bụghị, ebe ọ bụ na ihe niile na-egosi na ọ nwere ike ịdị otu ahụ.
Nọrọ na-ege ntị na Tusde na-esote maka ọkwa mmemme mwepụta anyị?
- Pete Lau (@ nnetezie2007) April 19, 2019
O yiri ka n’afọ a ha ga-agbaso otu usoro ahụ afọ gara aga. Ya mere, ekwentị ga-eze adade ke ufọt ufọt May. Ọ bụ ezie na anyị ga-echere nkwenye n'aka onye isi ala na Tuesday a, iji hụ ma Mee 14 ọ bụ n'ikpeazụ ka ụbọchị a họọrọ.
Na mgbakwunye, enwere obi abụọ ọzọ dị ukwuu na nke a. Dị ka Anyị amaghị ma a ga-enwe ụdị OnePlus 7 ma ọ bụ abụọ ga-eweta. Izuụka ndị a enweela ntapu, nke na-egosi ịdị adị nke ụdị Pro Ọ bụ ezie na onye isi ụlọ ọrụ ahụ achọghị ikwu ihe ọ bụla na nke a ugbu a.
Ya mere anyị na-atụ anya ị nweta data ndị ọzọ na Tuesday a. Ebe ọ bụ na ọ dịkarịa ala, a kwadoro ya mgbe anyị nwere ike izute onye OnePlus 7 na eze. Ya mere, anyị ga-ege ntị na ọkwa a ma anyị ga-agwa gị ihe niile anyị maara na Tuesday a gbasara njedebe dị elu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Na Tuesday ka a ga-ekwuwapụta mgbe egosiri OnePlus 7
Yabụ ị nwere ike ịnwe ihe ngosi batrị Samsung Galaxy S10 na ekwentị ọ bụla nwere igwefoto nwere oghere
Esi tọgharịa ekwentị Huawei